Boka nihinan-kitoza: ny manala kaka no adiny. [Cousins 1885 #812]
Proverbe Boka nangala-boatavo: hitondra roa, tsy mahazaka; hitondra iray, mimonomonona. [Veyrières 1913 #1982, Cousins 1885 #805]
Boka nangala-boatavo : mifampitolona samy malama. [Cousins 1885 #806, Veyrières 1913]
Boka nangala-pary: ny fary tsy azo, ny tanana feno lay. [Cousins 1885 #807]
Boka nangala-pihinana: tratr’ andro eo am-pisangian-takotra. [Veyrières 1913 #1985, Cousins 1885 #809]
Proverbe Boka nangala-tsira: any andrefan-tanàna vao ningoso reny. [Cousins 1885, Veyrières 1913]
Mangalatra an tsena: mihaika ny ambaniandro. [Cousins 1885 #1613]
Mody tsy sompatra, kanjo mangalatra ny akondron’ ny marary. [Cousins 1885 #1944]
Proverbe Na miroba aza ny tsena, ny tsy mangalatra ve dia mba ho very ? [Veyrières 1913 #0, Cousins 1885 #2014]
Proverbe Ny kely mahafaty ny lehibe tsy mangalatra. [Cousins 1885 #2279]
Proverbe Ny mangala-mahafaty ; fa ny mangata-mahavelona. [Houlder 1895 #1066, Cousins 1885 #2325]
Proverbe Raha manan-karen-drahavavy tsy tia: raha miditra, ataony hangataka; raha mivoaka, ataony hangalatra. [Cousins 1885 #2686]
Proverbe Raha sorohitra iaraha-mahita, ka mangala-misary, tsy mety. [Veyrières 1913 #3215, Cousins 1885 #2713, Houlder 1895]
Proverbe Toy ny amboa mainty vava, ka ataony ho nangala-pihinana ihany. [Houlder 1895 #1071, Cousins 1885]
Proverbe Totozy nangala-dronono : tsy voky fa lendem-bolo. [Rinara 1974 #272, Cousins 1885]
Proverbe Tsy mangalatra, fa mandrairay. [Houlder 1895 #1062, Rinara 1974 #292, Cousins 1885 #3379]
Proverbe Tsy mangalatra manana adidy, ohatra ny fangala-bola. [Cousins 1885, Houlder 1895]
Proverbe Vinanto saro-kenatra : asaina, tsy avy; avela, mangala-pihinana. [Veyrières 1913 #1483, Cousins 1885 #3679]
Proverbe Voaira izy, hoy Ibango nangala-poly. [Rinara 1974 #4966, Cousins 1885 #3690]